MUQDISHO: Ciidamada Dowladda oo markale rasaar ku furay caawa dad shacab ah – Radio Daljir
MUQDISHO: Ciidamada Dowladda oo markale rasaar ku furay caawa dad shacab ah
Diseembar 3, 2021 6:02 g 0
Gaari Cabdi Bile oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa rasaas ku furay dad shacab ah oo marayay agagaarka Isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho.
Mahad C/raxmaan Maxamuud oo ka mid ahaa dhalinyarada kunool Muqdisho ayaa ka mid ah dadka ku dhaawacmay rasaasta ay fureen ciidanka dowladda ciidanka.
Mahad ayaa la sheegay in rasaasta ay fureen ciidanka in ay ka haleeshay Madaxa, waxaana loo cararay Isbitaalka Digfeer, balse xaaladdiisa Caafimaad ayaa aad looga deyrinayo sida ay sheegeen dhaqaatiirta isbitaalka Digfeer.
Xalay ayay aheyd markii ciidanka dowladda ay Muqdisho ku dileen dhalinyaro wada dhalatay ka dib markii ay rasaas ku fureen kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray Sakariye iyo Sowdo .
Halkan ka daalaco sawirka wiilka ay Askartu rasaasta ku fureen caawa.
Wasiirka Caddaalada DFS: “Waxaa lasoo qabtay askartii ka dambeysay dilalkii ka dhacay Muqdisho”
Booliska Gobolka Banaadir oo ka hadlay dilkii Sakariye & Sowdo (daawo)